China Quail Nipple Drinker Dish Manufacturer sy mpamatsy | Marshine
1. Miaraka amin'ny visy
2. Adidy mavesatra
3. Amin'ny faritra ambany azo esorina amin'ny fanadiovana mora foana
Lovia fisotro ronono papelika
Anaran'ny vokatra Lovia fisotro ronono papelika
Fitaovana vokatra PP, PE, PVC
Lanjan'ny vokatra 20g
Loko vokatra Mena na fotsy
Vokatra vokatra 500pcs / bag
Haben'ny vokatra 4.2cm * 6.5cm
Entam-barotra vokatra: vilia baolina ho an'ny papelika na paty.
Fifandraisan'ny vokatra: Fifandraisana amin'ny visy
1. Rano madio - fisotroana mivantana ho an'ny Akoho avy amin'ny mpisotro nono, tsy misy raraka sy alona, ​​toy ny mpisotro endrika am-bozaka, mba hahazoana antoka fa afaka madio sy madio ny akoho, izay afaka misoroka aretina vorona.
2.Save labor-mifandray amin'ny fantsona PVC na fitoeran-drano, tsy mila manamarina matetika ny toetran'ny rano, mila miantoka fotsiny ny fantsom-pifaneraserana PVC mifandray amin'ny rano na misy rano ny fitoeran-drano.
3.Mora ny fampiasan'ny akoho azy - Volavola mena / mavo / volomboasary mamirapiratra, manintona vorona na akoho ary ny mpisotro nipple dia manome rano mitete isaky ny voadona izy ireo, afaka misoroka aretina sasany amin'ny vorona ho an'ny akoho milalao izy ireo.
4.Mora ny manadio ny nipple, noho ny faritra azo esorina.
Previous: Amboara mpamahana rano amin'ny voromailala
Manaraka: Vorona akoho vorona akoho